Any am-pandosirana efa ho iray volana : miantso an’i Leva hipoitra ny vadiny | NewsMada
Par Taratra sur 28/02/2020
Samy mbola ifampitadiavana izao izany ny tale jeneralin’ny CNaPS teo aloha na ny depiote teo aloha any Mahabo. Nanao antso avo mihitsy ny vadin’ity olom-boafidy ity mba hivoahany amin’ny toerana isitrihany any.
Ho feno iray volana tsy ho ela ny nanjavonan’ny depiote teo aloha, Raveloson Ludovic na i « Leva Sydney ». Tsy hita popoka hatramin’izao na efa namoahana didy fikarohana sy nanetsehana mpitandro filaminana amin’ireo lalam-pirenena, indrindra ny RN7 aza. Nanao antso avo tamin’ny haino aman-jery iray noho izany ny vadiny, ny depiote Razafindrazalia Yvonne, afakomaly ny amin’ny tokony hivoahany amin’izay toerana hiafenany na misy azy any.
Tsiahivina fa nivoaka ny fonjan’i Morondava, ny 5 febroary teo ity olom-boafidy teo aloha tao Mahabo ity. Nahazo fahafahana vonjimaika avy amin’ny fitsarana ao Toliary ny tenany ary efa nihazo avy hatrany ny tetsy amin’ny lapan’i Tsimbazaza.
Fampiatoana mpitsara roa any Toliary
Nanaitra ny maro izany ka nahatonga ny fanjakana naka fepetra. Tonga hatrany amin’ny fampiatoana amin’ny asany ireo mpitsara roa tany Toliary izany ary nirosoana amin’ny fanadihadiana azy ireo ny amin’ny mety hisian’ny kolikoly amin’ny namoahana an’i Leva io. Nilatsaka ny didy fikarohana ity olom-boafidy teo aloha ity avy eo.
Teo anelanelan’izany, nataon’ny mpitandro filaminana andrimaso, notazonina any Mahabo ny vadiny, Razafindrazalia Yvonne. Notendren’ny HCC, hisolo an’i Leva anefa io vadiny io ny 10 febroary noho izy lisitra faharoa tamin’ny fifidianana. Banga rahateo ny toerana ho an’ny distrikan’i Mahabo eny amin’ny lapan’i Tsimbazaza.
Raharaha miisa fito maha voasaringotra an’i Leva
Marihina fa miisa hatrany amin’ny fito any ho any ny raharaha ahina ho maha voasaritongotra ity depiote teo aloha ity. Efa nampidirina am-ponja an’i Leva, teo aloha ary nahazo sazy mihatra dimy taona an-tranomaizina amin’ny fiampangana sasany. Anisan’izany ny fanimbana ny ala ao amin’ny faritra arovana ao Morondava. Eo koa ny fanararaotam-pahefana sy ny fitrandrahana tsy manara-dalàna ny ala. Ny fandrahonana sy fampihorohoroana olona…
Tsy mbola misy mangirana ny amin-dRabekoto Raoul
Araka izany, tena mbola ifampitadiavana tokoa ve aloha i Leva hatramin’izao ? Hipoitra ihany koa izy manoloana izao antso avo nataon’ny vadiny, sady depiote izao ?
Etsy an-daniny, tsy mbola hita nanjavonana koa na efa namoahana filazana fikarohana aza ny tale jeneralin’ny CNaPS teo aloha, Rabekoto Arizaka Raoul.